एक दुई जना सांसद बगाएको भए सरकारको ध्यान जान्थ्यो कि ? — Imandarmedia.com
एक दुई जना सांसद बगाएको भए सरकारको ध्यान जान्थ्यो कि ?
‘पुर्वसांसद आफैं चिप्लिएका छन् । अब सुधारको प्रयास गर्छन् कि ?’ याे भनार्इ दीनराज जोशीले हाे । सोमबार साँझ धनगढीबाट सार्वजनिक बसको यात्रा गर्दै बझाङ आइपुगेका पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडा नारुगाड खाेलामा चिप्लिएपछि जाेशीले यसाे भनेका हुन् ।
मंगलबार रातिदेखिको अविरल वर्षाबाट आएको बाढी र पहिरोका कारण जयपृथ्वी राजमार्ग ठाउँ ठाउँमा अवरुद्ध भएपछि पूर्वसांसद अफिलाल ओखेडाले सास्ती भोगेका हुन् । गाडी चल्न नसक्ने भएपछि जिल्लामा तय गरिएको भेटघाटको हतारोमा रहेका ओखेडाले जँघार तरेर सडक पार गरे ।
पानी दर्किरहे पनि उनले पटक पटक चिप्लिँदै खोलाजस्तै बनेका सडक पार गरे । पूर्वसांसद चिप्लिन लाग्दा अन्य यात्रुहरु हाँस्दै मुखामुख गर्थे । कतिपय यात्रु उनको कार्यकालमा जिल्लाबाट ५/५ जना सांसद हुँदा पनि सडकको अवस्था सुधार गर्न नसकेको भन्दै ‘खुच्चिङ’ भनिरहेका थिए । कतिपय नेता आफैंले दु:ख भोगेपछि केही गर्छन् कि भन्ने आस व्यक्त गरे ।
चैनपुरका दिवस स्नेहीले व्यंग्य गर्दै भने, ‘खोलो तर्दासम्म दु:ख रै’छ भन्ने सम्झिन्‍छन् । वारि आइसकेपछि भुली हाल्छन् ।’ कतिपयले एक दुई जना सांसद बगाएको भए सरकारको ध्यान जान्थ्यो कि भन्न समेत भ्याए । नारुगाड खोला बढेर सडकमा आएको बाढीका कारण सक्ने मान्छेहरु पार गरेर वारि आए पनि महिला बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरु भने तर्न नसकेर अलपत्र परेका थिए ।
पूर्वसांसद ओखेडाले बझाङको सडकको हालतबारे पहिलेदेखि नै जानकार रहेको र सुधारको विषयमा जहिल्यै धेरै प्रयास गरेको दाबी गरे । ‘सरकार सदन सबैतिर कुरा उठाएकै हो’ उनले भने ‘ जयपृथ्वी राजमार्गलाई कम्तीमा दुइलेनको बनाइदिनुस् ।
साह्रै जोखिम भएको ठाउँमा सुधारको योजना हालिदिनु भनेर पटक पटक मन्त्रालय धाएको छु । तर सरकारले चलेकै त छ नि भन्ने खालको व्यवहार गऱ्यो ।’ उनले काठमाडौंबाट दुरविन लगाएर दुर्गमलाई हेर्ने सरकारी प्रवृत्तिका कारण बझाङका दुख सरकारले नदेखेको आरोप लगाए ।